LokaChantha: December 2010
Lokachantha Pagoda and Temple in the snow (28-Dec-2010)
Posted by LokaChantha at 11:52 AM No comments:
နယူးဂျာစီ မဟာစည်သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာအတွင်း ဆောက်လုပ်နေသော လောကချမ်းသာ ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ကျောင်းဆောင်တော်ကြီး၏ အဆောင်-၂ (တောင်ဘက်အဆောင်)မှာ ဓမ္မာရုံပါရှိသော အဆောင် ဖြစ်၏။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် စနေနေ့က လောကချမ်းသာဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ကြွရောက်၍ သံဃာတော်များ အဆောင်-၂ အုတ်မြစ်ပေါ်တွင် ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ကြစဉ်။
Posted by LokaChantha at 9:14 PM No comments:
Installing reinforcement in the foundation footing on 17-Dec-2010.
Preparing formwork for Building Two on 15-December-2010.
Posted by LokaChantha at 4:16 PM No comments:
နယူးဂျာစီ မဟာစည်သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာ၊ ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ကျောင်းဆောင်ကြီး၏ အဆောင်-တစ် မြေအောက်ထပ်နံရံတွင် အားဖြည့်သံချောင်းများ တည့်သွင်းသော လုပ်ငန်းနှင့် အဆောင်-နှစ်တွင် ကျောက်စရစ်ခဲများ ခင်းသောလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြစဉ်။
Posted by LokaChantha at 5:37 PM No comments:
နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်းတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် စနေနေ့၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၏ နောက်ဆုံးသင်တန်းများအဖြစ် အဘိဓမ္မာ ဝီထိပိုင်း သင်ခန်းစာများ ပြန်လည် သင်ကြားခြင်းနှင့် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် ပဋိကူလမနသိကာရပိုင်း သင်ကြားပို့ချခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၏။
သင်တန်းသို့ ပုံမှန်တက်ရောက်ကြသူ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၁၅ ဦးခန့်ကို လောကချမ်းသာဆရာတော်က အဘိဓမ္မာ ဝီထိပိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်သားစရာများနှင့် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် သမ္ပဇညပဗ္ဗနှင့် ပဋိကူလမနိသိကာရပဗ္ဗပိုင်းတို့ကို ရှင်းလင်း သင်ကြား ပို့ချပေး၏။
သင်တန်းပြီးသော် လောကချမ်းသာ စနေနေ့ ဆည်းဆာတရားပွဲကို အရှင်ဝိမလက “၃၂-စု အရင်းပြု၍”ဟူသော တရားတော်ကို ဟောကြား ချီးမြှင့်ရာ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်၏ ၃၂-ကောဋ္ဌာသ ပါဠိ နိဿယကို အားလုံး ညီညာဖြဖြ ရွတ်ဆို ပူဇော်ကြ၏။
ပဋိကူလမနသိကာရပိုင်း (ဆရာတော်ဦးဗုဓ်၏ ပါဠိနိဿယ)
(ဃ) ဘိက္ခဝေ-ရဟန်းတို့။ ဧဝမေဝခေါ-ဤအတူလျှင်။ ဘိက္ခု-ရဟန်းသည်။ ပ။ ဣမမေဝ ကာယံ-ဤရူပကာယ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာလျှင်။ ပစ္စဝေက္ခတိ-ဆင်ခြင်၏။
ဣမသိံ္မ ကာယေ-ဤတစ်လံမျှလောက်သော ရူပကာယ ခန္ဓာကိုယ်၌ -
(၁) ကေသာ - နှစ်ကုဋေ ငါးသန်းသော ဆံတို့လည်းကောင်း။
(၂) လောမာ - ကိုးသိန်းကိုးသောင်းသော အမွေးတို့လည်းကောင်း။
(၃) နခါ - ငါးကြင်းကြေးသဖွယ် နှစ်ဆယ်သော လက်သည်း ခြေသည်းတို့လည်းကောင်း။
(၄) ဒန္တာ - သုံးဆယ့်နှစ်ချောင်းသော သွားတို့လည်းကောင်း။
(၅) တစော - တစ်ကိုယ်လုံးကို ခွာ၍ လုံးသည်ရှိသော် ဆီးစေ့ခန့်မျှရှိသော အထူးထူးသော အဆင်းရှိသော ပါးသော အပေါ်ရေ၊ အဆင်းဖြူသော ထူသော အတွင်းရေလည်းကောင်း။
(၆) မံသံ - တိုက်နံရံကို လိမ်းကျံသော မြေစိုင်ကဲ့သို့ အရိုးကို လိမ်းကျံသော ကိုးရာသော အသားလည်းကောင်း။
(၇) နှာရု - နံရံကို ဖွဲ့သော ကြိမ်နွယ်ကဲ့သို့ အရိုးကိုဖွဲ့သော ကိုးရာသော အကြော၊ အရသာကို ဆောင်သော ခုနစ်ထောင်သော အကြောလည်းကောင်း။
(၈) အဋ္ဌိ - သုံးရာသော အရိုးလည်းကောင်း။
(၉) အဋ္ဌိမိဉ္ဇံ - ကျက်စွာပေါင်း၍ ဝါးကျည်၌ ထည့်အပ်သော ကြိမ်ညွန့်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသော ဖြူသော အဆင်းရှိသော ရိုးတွင်းခြင်ဆီလည်းကောင်း။
(၁၀) ဝက္ကံ - ရေမျိုမှ ဆက်သော အကြော၏အဆုံး နှလုံးသားကို ခြံရံ၍ တည်လျက် သရက်သီးပွတ်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသော စဉ်းငယ်နီသော အဆင်းရှိသော အသားစိုင်နှစ်ခုဟု ဆိုအပ်သော အညှို့လည်းကောင်း။
(၁၁) ဟဒယံ - သားမြတ်နှစ်ခုအလယ်၊ ကိုယ်အတွင်း ရင်အချိုင့် အညှို့နှစ်ခုအကြား၌ တွဲလျား ဦးစောက်တည်သော ပညာရှိအား စဉ်းငယ်ပွင့်သော၊ ပညာမဲ့အား ငုံသော၊ အပေါ်ဖတ်ကို ခွာ၍ ပစ်အပ်သော ပဒုမ္မာကြာငုံတမျှ အပကား ပြေပြစ်သန့်ရှင်း၊ အတွင်းကား သပွတ်ခါးအူသဖွယ် အလယ်၌ ပုန်းညက်စေ့ဆန်လောက်သော တွင်း၌။
“စရိုက်နှင့်အညီ၊ နီမြန်း-ရာဂ၊ ဒေါသ-မည်းငြား၊ သားဆေးရည်-မောဟ၊ တက္က-ပဲပြုတ်ရည်၊ ဝါသည်-သဒ္ဓါ၊ ပညာ-ပြိုးပြက်၊ ဇောတမျက်သွင်၊ အရောင်ထင်သော” မနောဓာတ်, မနောဝိညာဏဓာတ်, စိတ်, စေတသိက်တို့၏ မှီရာ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်တည်းဟူသော တလက်ဖက်မျှလောက်သော နှလုံးသွေးရှိသော နှလုံးသားလည်းကောင်း။
(၁၂) ယကနံ - သားမြတ်နှစ်ခုတို့၏ အလယ်၌ လက်ယာနံပါးကို မှီလျက် ကသစ်ရွက်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသော ဖျော့တော့တော့ နီသော အဆင်းရှိသော ပညာရှိအား ငယ်သည်ဖြစ်၍ နှစ်ခု သုံးခု၊ ပညာမဲ့အား ကြီးသည်ဖြစ်၍ တစ်ခုတည်းသော အသည်းလည်းကောင်း။
(၁၃) ကိလောမကံ - ဖြူသောအဆင်းရှိသော အသားတရစ်ကို ရစ်သော အဝတ်ကဲ့သို့ အညှို့, နှလုံးကို ဖုံး၍ တည်သော အမြှေး၊ ကိုယ်အလုံး၌ အရေ၏ အောက်မှ တည်သော အမြှေးအားဖြင့် နှစ်ပါးသော အမြှေးလည်းကောင်း။
(၁၄) ပိဟကံ - နှလုံးသား၏ လက်ဝဲနံပါး၌ မှီလျက် လက်ခုနစ်သစ်ခန့်မျှ နွားလျှာဖျားသဏ္ဍာန် ညိုသော အဆင်းရှိသော ဝမ်းလျှော သရက်ရွက်ဟု ဆိုအပ်သော အသားဖျဉ်းလည်းကောင်း။
(၁၅) ပပ္ဖါသံ - အညှို့, နှလုံးကို ဖုံး၍ တည်လျက် မုန့်ယှက်ပြတ်သဏ္ဍာန် နီသောအဆင်းရှိသော သုံးဆယ့်နှစ်ခုသော အသားလွှာတည်းဟူသော ကလအုန်းဆောင်းထပ်ဟု ဆိုအပ်သော အဆုတ်လည်းကောင်း။
(၁၆) အန္တံ - သွေးပြည့်သော ကျင်း၌ အရေကို ဆုတ်၍ ထည့်အပ်သော မြွေခွေကဲ့သို့ လည်ချောင်းမှ ဝစ္စမဂ်တိုင်အောင် ကိုယ်တွင်း၌ တည်သော ယောက်ျားအား သုံးဆယ့်နှစ်တောင်၊ မိန်းမအား နှစ်ဆယ့်ရှစ်တောင်ရှိသော နှစ်ဆယ့်တစ်ပတ် ခွေ၍နေသော ဖြူသောအဆင်းရှိသော အူမလည်းကောင်း။
(၁၇) အန္တဂုဏံ - ခြေသုတ်ကြိုးဝန်းကို ဖွဲ့သော ကြိုးသေးကဲ့သို့ နှစ်ဆယ့်တစ်ပတ်ခွေရာ၌ အူမကို ဖွဲ့သော မှော်မြစ်အတူ ဖြူသော အူသိမ်လည်းကောင်း။
(၁၈) ဥဒရိယံ - အစွန်းနှစ်ဘက်၌ ကိုင်၍ ညှစ်အပ်သော စိုသော ပုဆိုး၏ အလယ်အဖုကဲ့သို့ နှစ်ဆယ့်တစ်ပတ်ခွေသော အူမ၏ အလယ်အဖုဟု ဆိုအပ်သော သုံးဆယ့်နှစ်ပါးသော ပိုးမျိုးတို့၏ နေရာ အစာသစ်အိမ်၌ တည်သော ခွေးစားကျင်း၌ ခွေးအန်ဖတ်ကဲ့သို့ မျိုအပ်သော အစာသစ်လည်းကောင်း။
(၁၉) ကရီသံ - ကျည်ထောက်၌ ထည့်အပ်သော မြေညက်ကဲ့သို့ အူမ၏အဆုံး အစောက်ရှစ်သစ်ခန့်မျှ ရှိသော အစာဟောင်းအိမ်၌ တည်သော အစာသစ်မှ ကျက်၍ ကျသော အစာဟောင်းတည်းဟူသော ကျင်ကြီးလည်းကောင်း။
(၂၀) မတ္ထလုင်္ဂံ - ဗူးအုံ၌ ထည့်အပ်သော မုန့်ညက်စိုင်သဏ္ဍာန် ခေါင်းခွံတွင်း၌ ချုပ်ကြောင်းလေးခုကို မှီ၍ တည်သော မုန့်ညက်စိုင်အတူ ဖြူသော ဦးနှောက်လည်းကောင်း။
(၂၁) ပိတ္တံ - ရေပြည့်သော သပွတ်ခါးသီးသဏ္ဍာန် နှလုံးအဆုတ်တို့၏ အလယ် အသည်းကို မှီ၍ တည်သော နောက်ကျုသော သစ်မည်စည်ဆီနှင့်တူသော အအိမ်ဖြင့် ဖွဲ့အပ်သော ဗဒ္ဓသည်းခြေ, ဆံ, အမွေး, ခြေသည်းလက်သည်း, သွားတို့၏ အသားမှ လွတ်ရာ အရပ်ခြောက်ထပ် ကြမ်းတမ်းသော အရာကို ထားလျက် မုန့်ယှက်၌ ဆီကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်လုံး နှံ့၍ တည်သော ညှိုးနွမ်းသော ပန်းအဆင်းရှိသော အအိမ်ဖြင့် မဖွဲ့အပ်သော အဗဒ္ဓသည်းခြေအားဖြင့် နှစ်ပါးသော သည်းခြေလည်းကောင်း။
(၂၂) သေမှံ - မစင်တွင်းကို ပိတ်သော ပျဉ်ကြီး တန်စီးတွင်းအထက် မြှေးယှက်သော အမြှုပ်လွှာအသွင် ရေအပြင်ကို လွှမ်းသော ရေညှိပမာ အစာသစ်ကို ပိတ်လျက် အူမ၌တည်သော ဖြူသော အဆင်းရှိသော တကွမ်းစားမျှလောက်သော သလိပ်လည်းကောင်း။
(၂၃) ပုဗ္ဗော - အစေးရှိသော သစ်ပင်၏ ဓားခုတ်ရာ စသည်၌ စုဝေးသော အစေးကဲ့သို့ အမာပေါက်ရာ, ခလုတ်ထိရာ, ဆူးငြိရာ, မီးလျှံသင့်ရာ စသည်တို့၌ သွေးပုပ် စုဝေး၍ ဖြစ်သော ဖျော့တော့သော အဆင်းရှိသော ပြည်လည်းကောင်း။
(၂၄) လောဟိတံ - ကြည်လင်သော ချိပ်ရည်အဆင်းကဲ့သို့ ကိုယ်လုံးအနှံ့ အကြောကို လျှောက်၍ ရွေ့လျားသော တစ်ပြည်သားမျှလောက်သော ရွေ့လျားသော သွေး၊ ပျစ်ချွဲသော ချိတ်ရည်အဆင်းကဲ့သို့ အသည်းတည်ရာ၏ အောက်အဖို့ကို ပြည့်စေ၍ နှလုံး, အညှို့, အဆုတ်အထက် တစက်စက် ယိုစီးလျက် နှလုံး, အညှို့, အဆုတ်တို့ကို စွတ်စေ၍ တည်သော တကွမ်းစားမျှလောက်သော မရွေ့လျားသော သွေးအားဖြင့် နှစ်ပါးသော သွေးလည်းကောင်း။
(၂၅) သေဒေါ - ရေမှ နုတ်အပ်သော ကြာရိုးမှ ယိုစီးသော ရေကဲ့သို့ ကိုယ်စိတ်ပူပန်သောအခါ အမွေးတွင်းတို့မှ ယိုစီးသော ဆီကြည်အဆင်းရှိသော အာပေါဓာတ်တည်းဟူသော ချွေးလည်းကောင်း။
(၂၆) မေဒေါ - ဆူသသူအား တစ်ကိုယ်လုံး၊ ကြုံသသူအား မြင်းခေါင်းသား စသည်၌ တည်သော နနွင်းဆိုးသော ပုဆိုးကဲ့သို့ ဝါသော အဆင်းရှိသော အဆီခဲလည်းကောင်း။
(၂၇) အဿု - ငိုကြွေးမြည်တမ်း ရယ်ပန်းကြီးသောအခါ မလျောက်ပတ်သော ဥတုအာဟာရမျိုး၊ မီးခိုး မြေမှုန့်ထိပါးသောအခါ စသည်တို့၌ မျက်စိမှ ယိုစီးသော ဆီကြည်အဆင်းရှိသော အာပေါဓာတ်တည်းဟူသော မျက်ရည်လည်းကောင်း။
(၂၈) ဝသာ - ထမင်းချိုး၌ သွန်းလောင်းသော ဆီကဲ့သို့ မီးပူသောအခါ စသည်တို့၌ များသောအားဖြင့် လက်ဖမိုး, လက်ဖဝါး, ခြေဖမိုး, ခြေဖဝါး, နှုတ်သီးဖျား, နဖူးပြင်, ပခုံးစွန်း၌ တည်သော အုန်းဆီအဆင်းနှင့်တူသော ဆီကြည်လည်းကောင်း။
(၂၉) ခေဠော - ချဉ်သီးစသည်ကို မြင်သောအခါ လက်ယက်တွင်းမှ ထွက်သော လက်ယက်ရေကဲ့သို့ ပါးစောင်နှစ်ဘက်မှ သက်၍ လျှာ၌ တည်သော လျှာဖျား၌ ကျဲသော၊ လျှာရင်း၌ ချွဲသော၊ အမြှုပ်နှင့်ရောသော အာပေါဓာတ်တည်းဟူသော တံတွေးလည်းကောင်း။
(၃၀) သိင်္ဃာဏိကာ - ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း၊ မလျောက်ပတ်သော ဥတု အာဟာရ၏ အစွမ်းဖြင့် ဓာတ်ချောက်ချားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော နုသောထန်းသီးဆန်နှင့်တူသော ဦးနှောက်မှ ယိုစီးသော အာပေါဓာတ်တည်းဟူသော နှပ်လည်းကောင်း။
(၃၁) လသိကာ - ဝင်ရိုးကို နယ်ဆီသုတ်သကဲ့သို့ တစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်သော အရိုးဆက်တို့၏ အကြားဝယ် နယ်ဆီကိစ္စကို ပြီးစေ၍ တည်သော မဟာလှေကားစေးနှင့်တူသော ပျစ်ချွဲသော အစေးလည်းကောင်း။
(၃၂) မုတ္တံ - တန်းတွင်း၌ မှောက်ခုံပစ်အပ်သော အဝကျဉ်းသော အိုးတွင်း၌ ဝင်သော တန်စီးရေကဲ့သို့ စည်ပေါင်းတွင်း၌တည်သော ပဲကြီးပြာရည်အဆင်းရှိသော ကျင်ငယ်လည်းကောင်း။
ဣတိ-ဤသို့။ ဣမေ ဒွတ္တိံသာကာရာ-ဤသုံးဆယ့်နှစ်ပါးသော အခြင်းအရာအစုံတို့သည် -
(က) ဝဏ္ဏတောပိ - အဆင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း။
(ခ) သဏ္ဌာနတောပိ - လုံးလုံးလျောင်းလျောင်း ပေါင်း၍ တည်ဟန် သဏ္ဌာန်အားဖြင့်လည်းကောင်း။
(ဂ) ဂန္ဓတောပိ - ညှီနံညှော်လောင်း မကောင်းသော ရနံ့အားဖြင့်လည်းကောင်း။
(ဃ) အာသယတောပိ - ဖြစ်ရာအကြောင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း။
(င) သြကာသတောပိ - တည်ရာအရပ်အားဖြင့်လည်းကောင်း။
(စ) အသုစိဘာဝေန - မစင်ကြယ်သည်၏အဖြစ်ဖြင့်။
(ဆ) ဇေဂုစ္ဆိဘာဝေန - စက်ဆုတ်ဖွယ်၏အဖြစ်ဖြင့်။
(ဇ) ပဋိကူလဘာဝေန - ရွံရှာဖွယ်၏အဖြစ်ဖြင့်။
(ဈ) ဒုဂ္ဂန္ဓဘာဝေန - ညှီနံညှော်လောင်း မကောင်းသော ရနံ့၏အဖြစ်ဖြင့်။
(ည) အသုဘဘာဝေန - မတင့်တယ်သည်၏အဖြစ်ဖြင့်။
အဇ္ဈတ္တံ ဝါ - မိမိသန္တာန်၌လည်း။
ကာယေ - ဆံ, အမွေးစသော အပေါင်းအစု၌။
ကာယာနုပဿီ - ဆံ, အမွေး စသော အပေါင်းအစုကို အဖန်တလဲလဲ ရှုသည်ဖြစ်၍။
ဝိဟရတိ - နေ၏။
ဘိက္ခဝေ - ရဟန်းတို့။
ဧဝမ္ပိခေါ - ဤသို့လည်း။
ဘိက္ခု - ရဟန်းသည်။
ကာယေ - ရူပကာယ၌။
ကာယာနုပဿီ - ရူပကာယကို အဖန်တလဲလဲ ရှုသည်ဖြစ်၍။
တရားပွဲပြီးသော် ၁၅ မိနစ်မျှ တရားရှုမှတ်ကြ၍ ကောင်းမှု ကုသိုလ် အစုစုတို့ကို အမျှပေးဝေကြလေသည်။
Posted by LokaChantha at 5:36 PM 1 comment:
Installing reinforcement rods for Building One basement concrete wall and spreading gravels/rocks at the base of Building Two for laying of foundation on 13-December-2010.
Posted by LokaChantha at 5:02 PM No comments:
နယူးဂျာစီ မဟာစည်သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာ၊ ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြစဉ်။